မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ - Kdom
ကမ္ဘာပေါ်ရှိကုန်သည်များနှင့်လက်ဝတ်ရတနာအနုပညာရှင်များနှင့်အတူ KDOM ပါတနာများကသင့်အားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်တစ်မူထူးခြားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံများကိုပေးအပ်ရန်အမိန့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုသင်အကောင်းဆုံးရေကြောင်း options များ, သငျသညျအသကျရှငျဘယ်မှာနေပါစေပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ နေ့တိုင်း, ငါတို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်းကိုသင်တုန့်ပြန်၏အလွန်မြင့်မားဆုံးအဆင့်ကိုပေးသေချာကမ္ဘာ့တလွှားဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာမှကယ်နှုတ်တော်မူ။
လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း on အများဆုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်ရှိပစ္စည်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူတင်ပို့နေကြသည် DHL EXPRESS!
ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ CA၊ AUS ပေးပို့ချိန်ခန့်မှန်းချက် - ၁၂-၂၅ ရက် (EMS ဦး တည်ရာခြေရာကောက်နှင့်အတူ)
Delivery အချိန်ခန့်မှန်းချက်: 10-14 ရက် (DHL ဦး တည်ရာခြေရာကောက်နှင့်အတူ)
Delivery အချိန်ခန့်မှန်းချက်: 10-14 နေ့ရက်များ (DHL ဦး တည်ရာခြေရာကောက်နှင့်အတူ)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးပို့ချိန်ခန့်မှန်းချက် - ၂-၄ ပတ် (Final Destination Tracking မပါ ၀ င်ပါ။ )
အမှာစာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ပြီး (၄၅) ရက်အတွင်းမရောက်ရှိသေးသောဖိနပ်အမှာစာများမှာငွေပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အခမဲ့ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ယူအက်စ်အမှာစာအတွက်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်အမိန့်ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက် ၇ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ သင်သည်မှန်ကန်သောခြေရာခံခြင်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည် thekdom.com/pages/track-your-order
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများအတွက်အချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ၁၀ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ သင်သည်မှန်ကန်သောခြေရာခံခြင်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည် thekdom.com/pages/track-your-order။ အကြံပေးလိုပါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှာစာများသည်တစ်ကြိမ်တင်ပို့ပြီးပြန်အမ်းငွေမရနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့အားလုံးရောင်းအားအပေါ်အလုပ်လုပ်နောက်ဆုံးမူဝါဒဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံး၌အမှားတစ်ခုမဟုတ်လျှင်သင်မှာယူမှုအတွက်ပြန်အမ်းငွေကိုပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Q: ဖိနပ်ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အံကိုက်နဲ့မပျော်ဘူး ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
A: support@thekdom.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပြီးပြtheနာဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပါမည် ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ၊ ၎င်းတို့မှာပုံနှိပ်ထားသောတီရှပ်များဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့သူတို့ကို un- ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသို့မဟုတ်သိုလှောင်သို့ပြန်ပို့လို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအပေါ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားပါမည်။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ မကြာခဏဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိသော်လည်းဘယ်သူမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ support@thekdom.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မိသောအမှားပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန်သာလိုအပ်သည်။ (က) သင်၏ပြောဆိုချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ပြီး (ခ) သင့်အားအမှားပြင်ရန်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်၌သိုမဟုတ်သိုလှောင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများအမြောက်အများရှိသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပစ္စည်းများစွာကိုသင်မှာယူတဲ့အခါမှာသူတို့ကသီးခြားစီတင်ပို့မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကသင့်ဆီကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်မှာပါ။ သင်သည်နောက်တစ်ခုမတိုင်မီသင်ပစ္စည်းတစ်ခုရကောင်းရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းများအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိကြပါနှင့်။ သူတို့သည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေကြောင်းသတိရပါ။